DataNumen: Software Yekuvandudza Kit yeVagadziri
musha > Developers
Software Yekuvandudza Kit (SDK) yeVagadziri
Kune yega yega data kudzoreredza software chigadzirwa, isu tinopawo inoenderana software yekuvandudza kit (SDK). Vagadziri vanogona kudaidza iyo application programming interface (API) inoshanda mu SDK kudzora maitiro ekugadzirisa zvakananga uye kusanganisa edu asingaenzaniswi ekudzosa data matekinoroji mune avo vega zvigadzirwa zvigadzirwa mushe.
Iyo SDK package inosanganisira SDK DLL mafaera, zvinyorwa uye sampuli kodhi mumitauro yakasiyana yekuronga yekushandisa maAPI.
Vagadziri vanogona kuronga mu:
Microsoft Visual C ++ inosanganisira C # uye .NET
Microsoft Inoona Foxpro
Microsoft Visual Basic inosanganisira VB .NET
Borland C ++ Muvaki
Chero chirongwa chemutauro chinotsigira kufona kweDLL
Kune matatu marudzi emhando yemalayisensi eS SDK:
License Yekuvandudza: Bvumidza iyo chaiyo nhamba yevagadziri kuti vashandise iyo SDK kuvandudza kwavo kunyorera. Semuenzaniso, kana munhu akatenga rezenisi rekuvandudza, ipapo mumwe chete mushambadzi ndiye anogona kushandisa SDK kusimudzira kunyorera. Ndokumbira utarise iye HAKUNA goverazve SDK DLL nechikumbiro chake kunze kwekunge iye atengawo marezinesi ekumhanya kana marezinesi emahara asingatsanangurwe pazasi.
Rezinesi Runtime: Bvumidza iyo yakatarwa nhamba yeyakagoverwazve SDK DLLs kuendeswa nechishandiso. Semuenzaniso, kana munhu akatenga gumi marezinesi enguva yekumhanya, ipapo anogona kugovera zvakare makopi gumi ema SDK DLL pamwe nechikumbiro chake.
Rezinesi isina yemahara: Bvumidza isina muganho nhamba yekuparadzwazve SDK DLLs kuendeswa nechishandiso. Izvi zvakangofanana nenhamba isingagumi yemalayisensi enguva yekumhanya.
Yemahara Yekuongorora Shanduro:
Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama kana kukumbira yemahara kuongororwa vhezheni yeiyo SDK package.